Welcome to European Buddhist Youth forum
The first European Buddhist Youth forum which has held in 2018 from 26 July to 31 July at Denmark Dharmasaya Buddhist temple was successfully and delightfully concluded. With the help of everyone, organizers and youth who attended were actively participated that it was very beneficial meeting, learning and great discussion among them from the Forum.
Out of this, from the 1st European Buddhist Youth Forum, Buddhist youths can establishedaNon Profit association named "European Myanmar Buddhist Youth Organization" which will be leading the 2nd European Buddhist Youth Forum in July 2019, that will be taking place in Germany.
Thus, if interested and wishes to build upastronger network between Buddhist youths and knowledge about Buddhism in Europe and other continent of the world.
It is most warmly welcome for everyone to submit application early.
Application period (Only online form)
2018 december 15 to 2019 april 30th.
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ဓမ္မဆာယာ ဓမ္မအရိပ်သာသနာပြုကျောင်းတွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာ ကျင်းပခဲ့သော ပထမအကြိမ် ဥရောပဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်ဖိုရမ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့်နှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့်များ ရရှိစေပြီး လူငယ်များအတွက် အလွန်အကျိုးများသည့် ဖိုရမ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ပထမအကြိမ် လူငယ်ဖိုရမ်မှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော “ဥရောပမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်အဖွဲ့”က ဦးဆောင်၍ ဒုတိယအကြိမ် ဥရောပဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်ဖိုရမ်ကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ စီစဉ်ကျင်းပသွားပါမည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအနေဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုများ ရရှိစေရန်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုလေ့လာခွင့်ရရှိစေရန်အတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးကာ တက်ရောက်နိုင်ကြပါကြောင်း နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂ဝ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂ဝ၁၉ ဧပြီလ ၃ဝ ရက်နေ့အထိ
Follow/like our facebook page : http://bit.ly/2RWm8Lr
Don't forget to send your passport photo with copy of form to embyorg@gmail.com
Please read the rules and agreements carefully from forum and if any concerns or questions, feel free to contact us.
Yan Pyay Aye @ Richard (Netherlands) +31653993965
Zin Thu Khant (Sweden) +46737048222
Ei Shwe Sin (UK) +447859136469
Akari Lin (Germany) +49 152 2264 6708